Забур 42 CARS - Nnwom 42 ASCB
1 NWOMA A ƐTƆ SO MMIENU
Kora mma “maskil” dwom.
1Sɛdeɛ ɔforoteɛ pere hwehwɛ nsuwansuwa no,
saa ara na me kra pere hwehwɛ wo, Ao Onyankopɔn.
2Onyankopɔn ho sukɔm de me kra, Onyankopɔn teasefoɔ no.
Da bɛn na mɛtumi akɔhyia Onyankopɔn?
3Me nisuo ayɛ mʼaduane
na da mu nyinaa nnipa bisa me sɛ:
“Wo Onyankopɔn wɔ he?”
ɛberɛ a mereka mʼakoma mu nsɛm;
sɛdeɛ na medi asafokuo anim,
na yɛde anigyeɛ nteateam ne aseda nnwom
nante yuu bom kɔ Onyankopɔn fie
wɔ afahyɛ da.
5Adɛn enti na woaboto, Ao me kra?
Adɛn enti na woteetee wɔ me mu saa?
mʼAgyenkwa ne me Onyankopɔn.
6Me kra aboto wɔ me mu
firi Yordan asase so,
Hermon mmepɔ so, firi Bepɔ Misar so.
7Ebunu kɔ ebunu mu
wɔ wo nsuo a ɛworo guo no nnyegyeeɛ mu;
8Adekyeɛ mu Awurade kyerɛ nʼadɔeɛ;
adesaeɛ mu ne dwom ba me nkyɛn.
Mebɔ mpaeɛ kyerɛ Onyankopɔn a ɔma me nkwa.
9Mebisa Onyankopɔn me Botan sɛ,
“Adɛn enti na wo werɛ afiri me?
Adɛn enti na ɛsɛ sɛ menantenante twa adwo,
mʼatamfoɔ nhyɛsoɔ nti?”
10Me nnompe te yea sɛ ɔdasani.
Mʼahohiahiafoɔ ateeteeɛ enti,
daa nyinaa wɔbisa me sɛ,
11Adɛn enti na woaboto, Ao me kra?
ASCB : Nnwom 42